पाँचखपन नगरपालिका : प्रमुख पदका प्रत्यासी विपिन राईलाई चार प्रश्न « Makalu Online – Leading News Portal from Province 1
पाँचखपन नगरपालिका : प्रमुख पदका प्रत्यासी विपिन राईलाई चार प्रश्न
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसंगै दलका उम्मेदवारहरु जनताका घरदैलोसम्म पुग्न थालेका छन् । दलका आआफ्नै प्रतिज्ञा र घोषणापत्र लिएर चुनावी अभियानमा उम्मेदवार, दलका नेता र कार्यकताहरु मतदातासम्म मत माग्न व्यस्त छन् । संखुवासभालाई पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने गठबन्धन दल र प्रतिदन्दीको रुपमा रहेको नेकपा एमालेबिचमै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
यसबिचमा पाँचखपन नगरपालिकाको नगर प्रमुख पदमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका विपिन राई र एमालेका हिन्दु कुमार राईको चुनावी अंक गणित हुन थालेको छ । गठबन्धनसँग एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । उनीहरु विकासका एजेण्डा लिएर मतदातका घरदैलो पुगिरहेका छन् । यसक्रममा प्रमुख पदका प्रत्यासी विपिन राईलाई हामीले ४ प्रश्न सोधेका छौं ।
१. तपाईको उम्मेदवारी केका लागि ?
मेरो उम्मेदवारी चाहीँ मैंले यसअघि पाँच वर्ष भित्र गर्छु र सक्छु भनेका कार्यहरु, धेरै काम त मैंले गरिसकेको छु र केही अधुरा रहेका कामहरु छन् । ती काम पुरा गर्नका लागि र बाँकी रहेका विकासका कार्यहरु गर्नका लागि मैंले उम्मेदवारी दोहोर्याएको हुँ ।
२. तपाईका प्रतिबद्धताहरु केके हुन् ?
वाना बिहिबारे वृहत खानेपानी आयोजना यसको मुख्य कामहरु सम्पन्न भई सकेको छ । अब उपभोक्ताका घरसम्म पानी पुरयाउन बाँकी छ । त्यस्तै वानाबाट खाँदबारी जोड्ने बडरेनीसम्मको सडकलाई पक्की बनाउने काम सुरु भईसकेको छ ।
यस्तै चैनपुर बाह्रबिसे सडकखण्डको कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको छ । यी ठूला र मूख्य योजनाहरु हुन् । यस्तै साना आयोजनाहरुलाई समेत अब पुरा गर्नेछौं ।
३. तपाई प्रतिदन्दी भन्दा के कारणले अब्बल हुनुहुन्छ ?
मेरो प्रतिदन्दी भनेको नेकपा एमालेका हिन्दु कुमार राई नै हो । वहाँ साबिक स्याबुन गाविसको अध्यक्ष भएर १० वर्ष बसे । यो अवधीमा वहाले १० होइन एउटा राम्रो काम समेत गर्न सक्नु भएन । अर्को कुरा म चाहीँ अब यसअघि पनि पाँच वर्ष नगर प्रमुख भएर धेरै कामहरु गरिसकेको छु ।
मसँग धेरै अनुभव छ । त्यसैले मेरो प्रतिदन्दी भन्दा म यस कारणले नै अघि छु ।
४. चुनावी अभियान कसरी अघि बढेको छ ?
हामीले सकेसम्म घरदैलोसम्म पुग्ने कोशिष गरेकाछौं । समय अभावले केही ठाउँहरुमा विभिन्न टोल र गाउँमा भेला भएर हाम्रा योजना र हाम्रो भिजन प्रस्तुत गरेर मतदातालाई मत मागि रहेकाछौं ।
वहाँहरुलाई हामीले गरेको पाँच वर्षको कामहरु देखाउँदै चित्त बुझाएर मत माग्दै अभियान अघि बढेको छ ।